Ogeysiis ku socda Soomaalida Sweden: Tuke Travel Agency waxay idin heysaa tikidho raqiis ah - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ogeysiis ku socda Soomaalida Sweden: Tuke Travel Agency waxay idin heysaa tikidho raqiis ah - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ogeysiis ku socda Soomaalida Sweden: Tuke Travel Agency waxay idin heysaa tikidho raqiis ah
Tuke Travel waxeey idiinka haqabtiri doontaa dhammaan adeegyada duulimaadkaaga oo dhameystiran.
Waxaan kaa iibinaynaa tikidyada midka ugu raqiisisan isla markaana tayadiisu ay aad u sareyso
Tuke Travel waxeey idiinka haqabtiri doontaa dhammaan adeegyada duulimaadkaaga adifoo gurigaada jooga.
Waxaan kaa iibinaynaa tikidyada, waxay qabanqaabineysaa safarkaada, waxayna kuu qaadeysaa garoonka diyaaradaha iyadoo kuu shaqeyn doonta ilaa ay hubsato inaad duushay.
07 6444 2204
Previous articleHaweeney ka tirsaneyd ciidamada Booliska oo caawa toogasho lagu dilay Muqdisho
Next articleXOG: Digniin laga soo saaray Qorshe Alshabaab ku doonayaan inay kula wareegaan Gobolka Gedo